China 3l 5l 10l 18l 20l vetikal akpa na igbe (cheertainer) maka HCIO hypochlorous acid mmiri factory na suppliers | Kaiguan
3l 5l 10l 18l 20l vetikal akpa na igbe (cheertainer) maka HCIO hypochlorous acid mmiri
Maka ijuputa mmiri Hypochlorous acid, 5 liter na 20 liter akpa vetikal n'ime igbe kacha ewu ewu. Akpa kwụ ọtọ n'ime igbe (cheertainer) bụ akpa ọhụrụ nke na-ejikọta mgbanwe nke akpa na igbe na uru dị mma nke ihe siri ike ma ọ bụ nke siri ike, nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke na nhọrọ ndị a niile. Ọ nwere akpa rọba nke nwere ụdị cube, ọtụtụ oyi akwa, mgbata, okpu ma ọ bụ valvụ na igbe kaadiboodu.
A na-eji plastik multilayer mee akpa Cheertainer na igbe. Igwe dị n'elu (polyamide + polyethylene) na-echebe site na ikuku oxygen na mmiri; njupụta ya na ihe mejupụtara ya nwere ike ịdị iche dabere na mkpa nke onye ahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Igwe dị n'ime (polyethylene) na-agbanwe ma na-eguzogide ịdọkasị ahụ.
Gụnyere mmiri acid hypochlorous HCIO, a na-ejikwa akpa anyị dị na igbe maka mmiri mmiri na viscous ndị ọzọ.
Nke gara aga: Akpa mbelata ọnụ ahịa nkwakọba gburugburu maka mmanụ moto
Osote: Environmental nkwakọ vetikal akpa (cheertainer) maka ulo oru ink, eserese na adhesives
Akpa mbelata ọnụ ahịa nkwakọba gburugburu maka...